March 2019 | Save A Train
Oge Ọgụgụ: 4 nkeji Historic hotels na Europe na-adịghị a obere anya, karịsịa na nnukwu obodo na a ọgaranya akụkọ ihe mere. Paris, London, Rome, Munich, Vienna - niile nke obodo ndị a nwere ọmarịcha ebe na-enye. Ndị njem nleta na-achọ ụfọdụ okomoko ọdịnala agaghị enwe nsogbu ị chọta ebe…
Adia Eze Day Na The Netherlands (eze)
Oge Ọgụgụ: 5 nkeji Adia King Ụbọchị ke Netherlands nwere ike ịbụ ihe kacha mma otu ke Holland. on 27 April, ha na-eme ememe King Willem-Alexander ụbọchị ọmụmụ na music, n'okporo ámá ọzọ, àkpịrị ahịa, na fun fairs. Eze aga site na obodo ya na ezinụlọ ya. N'abalị tupu…
5 Mere i kwesịrị ịdabere na Train Ticket ntinye akwụkwọ nrụọrụ
Oge Ọgụgụ: 3 nkeji The oyi bụ banyere agwụ na Noua na-akụ aka n'ọnụ ụzọ na nke a bụ oge mgbe ị na-eme atụmatụ gị na-abịa ezumike. Anyị niile na-achọ ụzọ dị ọnụ ala maka njem ma ọ bụrụ na ị na-achọ ụzọ kachasị mma…
Business Travel site Train, Zụọnụ Ndụmọdụ
Oge Ọgụgụ: 4 nkeji Atụmatụ a ezumike na Europe nwere ike mgbe ụfọdụ na-a mgbe. N'ihi na lezie njem, ọ bụ a dị ịrịba ama oge ego iji chọpụta lọjistik nke njem ma bulie a ọnọdu. Kwesịrị ị na-aga ihe niile na-yana idobe okirikiri ma ọ bụ na? Olee otú ị na-aga na-e, site…
Disneyland Ezumike Na Paris N'oge oyi na okpomọkụ
Oge Ọgụgụ: 5 nkeji Disneyland Paris bụ mgbe mba nile mbụ Disney Park maka ọtụtụ Fans ileta. Ị chọrọ ịma otú ka atụmatụ ndị kasị mma Disneyland ezumike na Paris n'oge oyi na okpomọkụ? Mgbe ahụ ị na-na na-abịa nri ebe! Dị na Marne-la-Vallee, mpaghara dịpụrụ adịpụ…
ụgbọ okporo ígwè na-eto eto, Train Travel France
Oge Ọgụgụ: 4 nkeji Ọtụtụ ndị njem biya na-amasị biya nwere Munich dị elu na ndepụta ha. Ọ na-a nyere na Oktoberfest ga-anọ n'ebe kwa, ma Nockherberg Starkbierfest – Munich Strong Beer Festival eweta ihe amara. No, bụghị ìgwè mmadụ. Ị ga-enwe ọkara ka ọtụtụ. Ma biya bụ okpukpu abụọ nke…
Oge Ọgụgụ: 4 nkeji N'ezie na-atọkwa ụtọ na ezigbo ịrịba flavors, ọma Chinese nri bụ mgbe ụfọdụ ike na-abịa site na Europe. Otú ọ dị, ozi ọma bụ na e nwere ịrịba Chinese ụlọ oriri na ọṅụṅụ na Europe - i nwere mara ebe-ahụ na ha, na-esi e….
The 6 Ga Gbalịa Austrian Nri
site Elizabeth Kawamura
Oge Ọgụgụ: 7 nkeji Ndị a bụ ndị m atụgharị n'uche na nke kacha mma na mpaghara efere m mgbe ụtọ, n'oge ọnụnọ m na Austria. Anọ m ebe ahụ n'oge ọkọchị 2016 m 4-ọnwa ụwa na a obere-sized obodo NGO. The ụwa ahụmahụ bụ oké, that I got to meet…
Oge Ọgụgụ: 3 nkeji Mgbe a njem kwuru na ịga France, ọtụtụ ndị ga-ntabi-eche nke Paris. Otú ọ dị, France isi obodo bụghị naanị obodo uru ịga na nke a mara mma mba, Ejegharị ejegharị na-Strasbourg bụ ọhụrụ IN. Ọtụtụ ndị ọzọ na ebe ndị dị ka kwesịrị ekele maka niile…